महिला र पुरुष दुबैलाई हुन सक्छ ‘स्तन क्यान्सर’, लक्षण र बँच्ने उपाय यस्ता छन्Main Samachar
महिला र पुरुष दुबैलाई हुन सक्छ ‘स्तन क्यान्सर’, लक्षण र बँच्ने उपाय यस्ता छन्
२१ चैत्र २०७७, शनिबार १४:११ प्रकाशित
काठमाडौँ । क्यान्सरलाई जटिल रोगका रुपमा लिने गरे पनि यो निको नहुने भन्ने होइन । पछिल्लो समय क्यान्सरको उपचारले निकै उचाई लिइसकेको छ । यद्यपी उपचार खर्चिलो भएका कारण मानिसहरु क्यान्सरसँग जुध्न बाध्य भइरहेका छन् ।
अझ कतियप मानिसहरु उपचारको पहुँचमा हुँदाहुँदै जनचेतनाका अभावका कारण क्यान्सर भएको अन्तिम अर्थात चौँथो चरणमा थाहा पाउने गरेको पाइन्छ । क्यान्सर चौँथो चरणमा पत्ता लागेपछि निको हुने सम्भावना निकै कम हुने चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
क्यान्सर महिला र पुरुष दुवैलाई हुन सक्छ । तर यसका प्रकार भने फरक हुने चिकित्सकहरुले बताएका छन् । विश्वभर महिलामा हुने क्यान्सर मध्ये स्तन क्यान्सर पहिलो नम्बरमा पर्छ । नेपालमा भने पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुने बिरामीको संख्या सबै भन्दा धेरै छ । त्यसपछि स्तन क्यान्सर हुने बिरामीको संख्या दोस्रो नम्बरमा रहेको छ । पछिल्लो समय स्तन क्यान्सर महिलाहरुमा मात्र नभएर पुरुषहरुमा समेत देखिन थालेको छ ।
शरीरका अन्य अंगहरुमा जस्तै महिलाको स्तनमा पनि कोषहरु बन्ने र नष्ट हुने कृया भइरहेको हुन्छ । स्तनमा रहेका कोषहरु मर्ने र असामान्य रूपमा वृद्धि हुन थालेपछि स्तन क्यान्सरको सम्भावना रहन्छ ।
कोषहरूको वृद्धि र विभाजन शरीरको आवश्यकता अनुसार हुने गरेको क्यान्सर विशेषज्ञ डा. विजेसराज घिमिरे बताउँछन् । तर, जब छिटो–छिटो र अत्यधिक मात्रामा कोषहरूको वृद्धि र विभाजन हुन्छ, तब पुराना कोषहरू टाँसिएर पुरानै ठाउँमा रही रहन्छन् । जसका कारण स्तनमा गिर्खा वा ट्युमर बन्ने प्रक्रिया सुरु हुने गर्दछ ।
कस्ता लक्षण देखा पर्छन् ?
स्तनमा भएका कोषमा असामान्य परिवर्तन आएर अनियन्त्रित तथा अनावश्यक वृद्धिबाट बन्ने गिर्खा, गाँठागुँठी, स्तनको छालामा हुने परिर्वतन, निप्पल भित्रतिर भासिने, स्तनबाट रगत बग्ने र घाउ निको नहुने, स्तन क्यान्सरका लक्षण भएको डा. घिमिरेले बताए ।
तर यस्ता लक्षण देखा पर्ने बित्तिकै क्यान्सर नै हुन्छ भनेर भन्न नमिलदे उनी बताउँछन् । कहिलेकाहीँ अन्य विभिन्न कारणले पनि यस्ता लक्षणहरु देखिन सक्छन् ।
क्यान्सर हुने प्रकृतिका ट्युमरले आफ्नो वरिपरी रहेका तन्तुहरु नष्ट गर्छन्। यस्ता ट्युमर शरीरका अन्य भागहरुमा फैलिन सक्ने हुन सक्छ ।
यस्ता ट्युमरलाई शल्यक्रिया गरेर शरीरबाट फाले पनि फेरि उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। स्तन क्यान्सर प्रायःजसो दूध उत्पादन हुने नलीबाट सुरु हुन्छ र शरीरको अन्य कुनै पनि भागमा फैलन सक्छ। स्तन क्यान्सर फैलिएर कलेजो, फोक्सो, मस्तिष्क जस्ता शरीरका अन्य भागमा पनि ट्युमर हुन सक्छ ।
जीवनशैली, मोटोपन, शरीरिक व्यायामको कमी, जाड रक्सीको सेवन, अस्वस्थकर खानपान, महिनावारी नियमित नहुनु, महिनावारी समयभन्दा ढिलो वा छिटो सुक्नु, बढी उमेरमा बच्चा जन्माउनु, वंशाणुगत लगाएतका कारणले महिलाहरुमा स्तन क्यान्सर हुने गर्छ । त्यस्तै स्तनपान नगराएका महिला, लामो समयसम्म गर्भनिरोध चक्कीको सेवन गरिरहेका महिलाहरुमा समेत स्तन क्यान्सर हुने जोखिम हुन्छ ।
स्तन क्यान्सर कति चाडो पत्ता लाग्छ ?
महिलाहरुमा स्तन क्यान्सर सुरु हुने बित्तिकै पत्ता लगाउन सकिने विज्ञहरुले बताउने गरेका छन्। विदेशमा ९० प्रतिशत महिलाहरु स्तन क्यान्सरको पहिलो स्टेजमा नै अस्पताल पुग्छन् । नेपालमा अन्य क्यान्सरका करिब दुईतिहाई विरामी तेस्रो र चौथो स्टेजमा अस्पताल पुग्ने गरेको पनि स्तन क्यान्सरमा भने धेरै विरामी दोस्रो स्टेजमा नै अस्पताल पुग्ने गरेका नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेको अनुसन्धानमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्तन क्यान्सर अन्य क्यान्सरको तुलनामा छिटो थाहा हुने भएका कारण अन्य क्यान्सरको तुलनामा स्तन क्यान्सरका विरामी निको हुने दर बढी भएको डा. घिमिरे बताउँछन् ।
स्तन क्यान्सर कति उमेर समुहकालाई ?
विकसित देशहरुमा ४० वर्ष माथिकालाई स्तन क्यान्सर हुने गरेको पाइएको छ भने नेपालमा ३५ वर्षदेखि नै महिलाहरुमा स्तनको समस्या देखिने गरेको पाइएको क्यान्सर विशेषज्ञ डा. सन्ध्या चापागाई बताउँछिन् । ‘यसको कारण यही हो भनेर पत्ता लाग्न सकेको छैन । जीवनशैली र खानपानका कारण हुन सक्छ । पछिल्लो सयम १७–१८ वर्षका किशोरीमा समेत स्तन क्यान्सर पत्ता लागेको छ । सानो उमेरमा स्तन क्यान्सरका बिरामी भेटिएपनि सामान्यतयाः स्तन क्यान्सर ४० वर्ष भन्दा माथिका महिलामा बढी देखिन्छ’, उनले भनिन् ।
बच्ने उपाय के ?
नियमित शारीरिक व्यायाम, जीवनशैली परिवर्तन, स्वस्थकर खानपान, बोसोयुक्त मासु नखाने, तारेको, पोलेको खाना नखाने, उपयुक्त उमेरमा बच्चा जन्माउने, स्तनपान गराउने, नियमित स्वास्थ्य परिक्षण गराउने, सरसफाईमा विशेष ध्यान दिने, नुन तथा पुराना अचार कम खाने, लामो समयसम्म गर्भ निरोधक चक्कीहरुको प्रयोग नगर्ने जस्ता कुरामा ध्यान दिन सके केही हदसम्म स्तन क्यान्सरबाट जोगिन सकिने चिकित्सकहरुले सुझाएका छन् ।
विभिन्न उपाय अपनाएर सबै प्रकारका क्यान्सहरु बाच बच्न सकिन्छ भन्ने नभएता पनि यस्ता सावधानी अपनाउँ केही हदसम्म क्यान्सर रोग लाग्नबाट बच्न भने सकिन्छ ।
धेरै मानिसमा अझै पनि क्यान्सर भएमा बाँचिदैन भन्ने डर भएको पाइन्छ। तर समयमै क्यान्सर पत्ता लागेर पहिलो र दोस्रो स्टेजमा नै उपचार हुन सकेमा क्यान्सरका बिरामी पनि अन्य सामान्य व्यक्ति सरह जीवनयापन गर्न सक्ने डा. चापागाई बताउँछिन्।
नेपालको सन्दर्भमा प्रायः जसो क्यान्सर लागेका मानिसहरु तेश्रो र चाँैथो स्टेजमा अस्पताल पुग्ने गरेको चिकित्सहरुले बताएका छन्। उनीहरुका अनुसार यो स्टेजमा विरामी अस्पताल पुग्दा धेरै ढिलो भइसकेको हुन्छ।
यसको जोखिम ४० वर्ष कटेका मानिसहरुमा बढि रहेको रहे पनि पछिल्लो समयमा क्यान्सर जुनसुकै उमेरका व्यक्तिहरुमा देखिने गरेको छ। तर पनि ४० वर्ष कटेका हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वास्थ्यको विशेष ख्याल गर्न जरुरी हुन्छ। इस्ता व्यक्तिहरुले समय–समयमा स्वास्थ्य परीक्षण गराइरहनु पर्दछ।